Indipendente 10680 WireE stato molto tempo da qua - Page 42 of 103 - https://themummichogblog.com
heimasíða 26 Peru Paddington er enrages upphaflega járnbrautum stéttarfélags
P (= síðu) + E <nrages> R <Ail> U <Nion> ( “upphaflega” þýðir fyrst og fremst bókstafi aðeins eru notuð); Paddington Bear upptök frá Perú í sögum barnanna eftir Michael Bond
Ọ nọwo na-a ogologo oge ebe ọ bụ na adawo m Blog a mgbaghoju anya site Waya.
M chọpụtara na nke a na-atọ ụtọ, ọ bụghị gabiga ókè na-agwụ ike, puzzle ka agaghịkwa na anya m na ịde blọgụ ọrụ 2021.
Dị ka taa bụ Tuesday, a isiokwu ga-atụ anya, na onye a bụ mfe ịnọ na ọtụtụ: okporo nwere ọtụtụ ebe e kwuru banyere wine, otú ọ na-mere na otú ọ na gwusia. N’ezie, a kama nnukwu ego nke thematic ọdịnaya e nyere okporo.
My ikpeazụ-eto-na taa bụ intersecting Ndenye na 6, 11 na 13, mbụ na nke abụọ nke ndị na-amaghị na m ma ike na-arụ ọrụ satisfactorily si wordplay.
My mmasị clues taa 4, maka ojiji nke “ite”, nke nọ na-m guessing maka afọ; 13, nke na-eme m ọchị mgbe penny akpatre ama esịn; na 12 na nke 23, ma n’ihi ire ụtọ nke n’elu.
* (…) na-egosi ihe anagram; nkọwa na-italicised; // ekewapụ nkọwa na otutu-definition clues
01 DOCILE Easy jikwaa na-ezu ohi leta si obibi
DO <mi> CILE (= obibi); “Na-ezu ohi leta (= mi)” pụtara akwụkwọ ozi “mi” na-ama esịn
04 CHAMPERS posh stof di etinye n’ime ite
H (= di) na CAMPERS (= “ite”, i.e. ndị pitching n’ụlọikwuu!)
10 juru ọchị nkwusa ekpe, nchịkọta akụkọ tụrụ ya n’anya
Iju (= na-atọ ọchị nkwusa) + L (= ekpe) + ED (= nchịkọta akụkọ)
11 SOAVE Verona si dobe espresso nkezi
Zoro ( “nke”) na “espresso nkezi”; Soave bụ a akọrọ, icha mmirimmiri-acha ọcha wine si a obere mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Verona, n’ihi ya “Verona si dobe (mmanya)”
12 naanị ihe ịga nke ọma na oru ngo site a wiska
S (= ịga nke ọma, na obituaries) na JUT (= oru ngo, riputasi); e.g. M nnọọ ka ya = m mere ya site na a wiska
13 TRANSACTOR Player onye na-ikekwe Switched n’akụkụ ọkọkpọhi negotiator
Cryptically, a player ( “omee”) onye na-ikekwe Switched n’akụkụ, i.e. nwere a mmekọahụ mgbanwe, a pụrụ ịkọwa dị ka a “trans-omee”!
15 ubi Ịchịkọta nụrụ TV na agbasa ozi n’ikuku
* (Anụ TV); “Agbasa ozi n’ikuku” bụ anagram egosi
16 cheese nkenke akụ South-East Cheshire ma eleghị anya,
CHEE <r> (= akụ; “nkenke” n’aka ikpeazụ akwụkwọ ozi ama esịn) + Ghaat (= South-East)
19 SWOOPS Ndo mgbe efu show nosedives
S <ho> W ( “efu” pụtara niile ma mbụ na ikpeazụ akwụkwọ ozi na-ama esịn + Oops (= mwute, dị ka mkpu)
21 POLEMIC Staff na-ahụhụ na ikekwe na-emepụta eneni
Osisi (= mkpara, mkpanaka) + MAỊ (= ebe o kwere omume, i.e. a zoro okwu)
22 Ụdị njem irughari kwa akara mmiri nso Malta maka whale spotting?
* (Irughari kwa) + M (= Malta); “Akara mmiri” bụ anagram egosi; whale spotting a pụrụ ịkọwa dị ka ụdị nke ụdị njem
25 MEAD Nne chetara ilo ume ọṅụṅụ
E (= ike) na Mad (gbochiri mmiri = nne, nke ịnyịnya; “chetara” na-egosi mgbanwe)
27 mkwado Bimbo mgbe nile interrupts oku okpu-agbachitere
<B> m <m> B <o> ( “mgbe nile” pụtara ọzọ akwụkwọ ozi naanị) na Ali (= oku okpu, i.e. Muhammad Ali)
28 Isiokwu mmanya Nyere iwu ọhụrụ Bălţi nakwa n’ebe ọwụwa anyanwụ booze
* (NEW Bălţi) + E (= Eastern); “Iwu” bụ anagram egosi
29 inem Free ntụrụndụ bụ nnoo cheap ọrụ
Emeso (= free ntụrụndụ, i.e. akwụ ụgwọ ha site onye ọzọ) + BỤ + <ch> E <AP> ( “nnoo na” n’aka n’etiti akwụkwọ ozi naanị)
30 GUTROT Na Rhineland, ọ dị mma red plonk
Gootu (= ezi ihe, German, n’ihi ya “na Rhineland”) + ire ere (= uhie uhie, na German); gutrot bụ ike ike, ọnụ ala mmanya, n’ihi ya “plonk”
01 DEMIJOHN Bottle kpakpando Moore na Travolta
Demi (= Moore, i.e. American omee) + JOHN (= Travolta, i.e. American omee)
02 sukruu Irish County si otu opener
Cork si (= Irish asị si) + arụ ọrụ (= otu)
03 LEES Python chọpụtara na sedimenti
<C> LEES <e> (= Python, i.e. John Cleese, si Monty Python si efe ọgbọ egwuregwu); “Ịkparị-kpuchie” pụtara mbụ na ikpeazụ akwụkwọ ozi na-ama esịn
05 HEDONIC Bacchanalian party ẹkenịmde nwaanyị na-elekọta
[DO (= party) na nne okuko (= nwanyi)] + m / C (= na-elekọta); hedonic bụ okwu ọzọ maka hedonistic
06 MUSCADELLE ngo na-echekwa otu isi grape
[A (= otu) + del (= isi, i.e. ihichapụ na a keyboard)] na Akwara (= ngo); muscadelle bụ a na-acha ọcha wine grape dịgasị iche iche
07 elu Otuto ochie-akwọ ụgbọ mmiri ọ rụsịrị nwere n’ọnụ na-apụ?
Ọpụ- (= ochie, mbụ) + <s> Alt (=-akwọ ụgbọ mmiri; “rụsịrị nwere n’ọnụ na-apụ” pụtara akwụkwọ ozi mbụ na-ama esịn)
08 Sherry kpafuo n’ime jụụ yad – ọ wusiri ike
Ghara ịbanye (= awagharị) na [SH (= (ịbụ) jụụ) + Y (= yad)]; sherry bụ ndị e wusiri ike wine
09 CLARET Bụchaghị mma mmanya na-eje ozi elu
Zoro ( “dịtụ) na ekwesị nwesịrị (” ka na-eje ozi elu “) na” mma mmanya “; ọkara & lit.
14 OENOLOGIST Expert onye nwetara Lois na a ala
* (ONE ọkọdọ Lọịs); “Na a ala” bụ anagram egosi; ihe oenologist bụ a wine ọkachamara
17 sommelier odibo ekwuo ọzọ ụgha gburugburu n’elu menu
M <enu> ( “top of” pụtara akwụkwọ ozi mbụ naanị) na * (ỌZỌ ụgha); “Ịkpa ákwà” bụ anagram egosi; a sommelier bụ a wine odibo na a restaurant
18 nwale Ultimate decider nke a uwe ojii departmental dakọtara?
Cryptically, “a CID (= Criminal enyocha Department) ule” a pụrụ ịkọwa dị ka a uwe ojii departmental egwuregwu
20 SPRITES Elvish ndiife atụ ogho n’ebe
PR (= atụ ogho, i.e. mmekọrịta ọhaneze) na saịtị (= ebe)
21 Daha BY Ileghara Anya tiketi na-anọ nkịtị Bentley
Pass (= tiketi, ikike) + B <entle> Y ( “ịnọ nkịtị” pụtara niile ma mbụ na ikpeazụ akwụkwọ ozi na-ama esịn)
in questo sport in et molto precoce Freddie Roach